Soomaaliya Oo Dalka Ugandha Uga Qeyb Gashay Shir Caalami Ah – XAMAR POST
Guddiga hirgelinta doorashada KGS SEIT ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 5 kursi
Ciidamada Itoobiya oo qorsheynaya inay galaan caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle.
Cumar Cabdirashiid oo si dag uga ka hadlay doorashadii shalay lagu qabtay Garoowe
Cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo tababar looga furay dugsiga Xorgoble Qardho.
Qm oo Cambaareysay duqeyn lala beegsaday Xero ku taalla Yeman.
Xildhibaankii ugu horeeyay oo maanta lagu doortay Garawe
Soomaaliya Oo Dalka Ugandha Uga Qeyb Gashay Shir Caalami Ah
By Mohamed Abdi On Mar 30, 2021
Saraakiil ka socotay Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shir looga hadlayo Caqabadaha xaduudaha, xalinta khilaafaadka iyo maareynta isticmaalka hubka fudud uga qeyb galay dalka Uganda.
Shirkaan oo ahaa mid heerkiisu sareeyo ayaa waxaa looga hadlayay faafista iyo maareynta isticmaalka Hubka fudud,iyadoo Adeegsiga hubka fudud uu yahay mid dhibaato weyn ku haya Dalalka dhaca Geeska Afrika.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay Xarunta Maareynta hubka fudud ee REKSA oo ay ku mideysan yihiin wadamadda Geeska Afrika ayaa waxaa kasoo qayb galay saraakiil ka socotay dhammaan Dalalka kuwooda madaxda ka ah xuduudaha.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa shirkaan uga qab galay Saraakiil sarsare oo ku shaqo leh arimaha hubka fudud ee xuduudaha iyo gudaha dalka.
Shirkaan ayaa laysku weydaarsaday caqabadaha ka jira dalalka ee dhanka xuduudaha iyo sida ugu fiican looga hortagi karo isticmaalka dhanka khaldan ee hubka fudud ee sida sharci darada ah ugu gacan galaya dadka kooxaha aan ku shaqada laheyn iyo shacabka.
Dhaxal Sugaha Sacuudiga Oo Warqad Casuumaad ah Udiray Imran Khan
DHAGEYSO: Puntland “Duulaanka Ay soo Qaadeyso DFS Waan Ka Feejiganahay”
Mohamed Abdi Jan 23, 2022
Dowladda Kenya oo markii ugu horeeysay ka hadashay aqoonsiga…
Cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo tababar looga furay…
Faah-faahino ka soo baxaya dilal ka dhacay Gaalkacyo
Boqor Buurmadow oo sheegay in ay ka baxeen Doorashada Soomaaliya
Waa maxay ujeedka Safarka RW Rooble ee Imaaraadka?
Soomaaliya iyo Gabon oo ka wada hadlay xiriirka labada dal
Deni oo magacaabay wasiiro ka tirsan maamulka Puntland
FADEEXO: Madaxweyne Qoor-Qoor oo Xabsiga Dhigay Musharaxa Kursiga HOP248 Sugaal…
Mareykanka oo u hanjabay Ruushka.
Madaxweynihii hore ee Ukraine oo la diiday in xabsiga la…
Axmed Madoobe oo xalay la kulmay guddoomiyaha cusub ee…
Soomaaliya iyo Imaaraadka carabka oo ka wadahadlay…
Prev Next 1 of 1,991